कोरोना भाइरसः न्यू योर्कमा किन धेरै मान्छे मरे? :: Setopati
कोरोना भाइरसः न्यू योर्कमा किन धेरै मान्छे मरे?
एजेन्सी न्यू योर्क, चैत २९
शुक्रबारसम्म न्यू योर्कमा लगभग एक लाख ७४ हजार बढी मान्छेमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको छ।
युरोपको सबैभन्दा बढि प्रभावित देश स्पेन र इटालीमा भन्दा पनि न्यू योर्कमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै छ।
शुक्रबारसम्म मात्र त्यहाँ कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या सात हजार ८ सय ४४ भइसकेको छ।
न्यू योर्कका गर्भनर एन्ड्रयूले बारम्बार विदेशीको आगमन र त्यहाँको जनसंख्याले संक्रमण बढाउनलाई मद्दत गर्दै आइरहेको बताउँदै आएका छन्।
अमेरिकाको आर्थिक राजधानी न्यू योर्कमा ८६ लाख मानिसहरू बसोबास गर्छन्। त्यहाँको १० हजार प्रति किमी जनघनत्वले यसलाई अमेरिकाकै घना शहर बनाएको छ।
न्यू योर्क शहरमा वार्षिक ६० मिलियन भन्दा बढी पर्यटकहरु आउँछन् भने धेरै यात्रुका लागि यो अमेरिकाको प्रवेशबिन्दु पनि हो।
यसको अर्थ कतैबाट आएको भाइरस संक्रमित व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला यही संक्रमण गराउन सुरु गर्छ।
न्यू योर्कमा पहिलो पटक भाइरसको पुष्टि मार्चमा भएपनि अमेरिकी आनुवंशिक विज्ञहरुले युरोपबाट त्यहाँ कोरोना फेबुअरीदेखि फैलिन सुरु गराएको बताएका छन्।
न्यू योर्क शहरमा ठूलो सामाजिक आर्थिक असमानता पनि छ। भाइरस फैलिनुको अर्को कारण यसलाई पनि मान्न सकिन्छ। धेरै मानिसहरू आवतजावत हुने यस ठाउँमा दुरू कायम गर्ने कुरा उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहनेगर्छ।
बढी भिडभाड हुने यसका ब्रोंक्स र क्वीन्स जस्ता क्षेत्रका बासिन्दाहरु पहिले देखिनै स्वास्थ्य समस्या र उचित हेरचाहको अभाव भोगिरहेका थिए। अहिले उनीहरूले नै कोरोना भाइरसबाट बढी संक्रमणको सामना गरिरहनु परेको छ।
‘यी कारणले गर्दा न्यू योर्कलाई संक्रमणले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने आधारहरू बनाएको अनुमान लगाउन सकिन्छ', कोलम्बिया विश्वविद्यालयका सार्वजनिक स्वास्थ प्राध्यापक र प्रकोप तप्परता विज्ञ इरविन रेड्लेनरले एजेन्सिी फ्रान्स प्रेसलाई भनेका छन्।
मार्च २ मा राज्यले दोस्रो केस पुष्टि गर्यो।
न्यू योर्क शहरको उत्तरमा रहेको न्यू रोशेलमा देखिएको केस पछि विज्ञ रेड्लेनरले इरविनले भनेका थिए, ‘अन्य देशमा फैलिए जतिकै स्तरमा यहाँ फैलिदैन भन्ने सोचेका थियौं।’
पछि न्यू योर्क शहरका मेयर बिल डी ब्लासियोले दोधारकाबिच मार्च १६ देखि सार्वजनिक स्कूल, बार र रेष्टुरेन्ट बन्द गर्न घोषणा गरे।
पछि मार्च २२ मा मात्र गर्भनरले सबै आवश्यक व्यवसाय बाहेक अन्य व्यवसायहरु बन्द गर्न लगाए र बासिन्दाहरुलाई घरमै बस्न आदेश दिए।
अहिले विज्ञहरु ‘उनीहरुले यो निर्णय लिन निकै लामो समय लागाएको’ बताउने गरेका छन्।
‘मेयर र गर्भनरबिच दुई फरक कुरा भयो। एक पक्षले स्कुल र रेष्टुरेन्ट जतिसक्दो चाढो बन्द गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अर्को पक्षले भने सबै कुरा हतारमा गर्दा आर्थिक र सामाजिक हिसाबमा निकै ठुलो असर भोग्नुपर्ने पर्ने तर्क राखेका थिए’, विज्ञ रेड्लेनरले भने, ‘संघीय सरकार र राष्ट्रपति ट्रम्पबाट समेत सबैले मिश्रित सन्देशहरु पाइरहेका थिए।’
तर न्यू योर्कका स्कूलहरु बन्द हुन र सबै शहरका बासिन्दालाई घरमै बस्ने आदेश दिन ६ दिन लाग्यो।
‘महामारीको समयमा ६ दिन पनि निकै धेरै दिन हो। यसले निकै फरक पार्न सक्छ। न्यू योर्कले निर्णय दिन समय लगायो।’ मेघनले भनिन्।
यसरी चाँडै स्थिर निर्णय नहुँदा न्यू योर्क शहरदेखि अन्य शहर र राज्यमा कोरोना फैलिन समय लागेन।
यसमा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको उदाहरण लिँदा ठिक होला। यहाँ निकै तीव्र गतिमा संक्रमण फैलियो। शुक्रबार सम्म मात्र २० हजार बढी मानिसमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ५५० जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २९, २०७६, १०:११:००